Talo & Tricks in Pictures ee kaabta ka iPhone
> Resource > iPhone Tricks u Sida loo kaabta Pictures ka iPhone> Talo &
Haddii aad leedahay dhowr sawiro dilaaga aad iPhone, si ay u hubiyaan ammaanka sawiradan, laga yaabo in aad rabto in aad gurmad sawiro ka iPhone si aad u computer ama drive dibadda adag. Ka dib oo dhan, si ay u dhawrto, kuwaas oo waxyaalo qaali ah, waxaad u ma noqon karaan more taxadir. Maqaalkani waxa uu bixiyaa siyaabo sahlan qaar ka mid ah aad u gurmad sawiro ka iPhone Camera Roll, Photo Library, iyo Photo Stream. Aaraa'da hoose raac.
Qaybta 1. Sida loo kaabta Sawiro Waxaad la iPhone (badbaadin ee iPhone Camera Roll)
Qaybta 2. Sida loo kaabta Sawiro Synced via Lugood ama Share in Photo Stream on iPhone (ka iPhone Photo Library iyo Photo Stream)
Waxaad isticmaali kartaa oo aad iPhone in ay sawiro si joogto ah u qaadan. Haddii ay sidaas tahay, tahay mid aad u badan tahay in ay sawiro gurmad aad qaadato ka iPhone waqti ka waqti aad. Sawiro aad qaaday aad iPhone Backing waa mid aad u fudud. Halkan waxaa ku qoran talooyin si ay gurmad kuwaas oo sawiro ka iPhone si aad u computer.
Wixii Windows Users:
Connect aad iPhone aad Windows PC. Ka dibna by furitaanka "Computer", waxaad arki kartaa jiro qalab saari karo.
Fur galka iyo ka heli sawirada aad rabto in aad gurmad ka iPhone. Copy iyo paste iyaga si aad u computer drive deegaanka adag.
Wixii Users Mac:
On Mac ah, waxaa jira dhowr Chine in ay yihiin in ay ku caawiyaan gurmad sawiro aad uga qaadatay iPhone in aad Mac.
Ka dib markii isku xidha aad iPhone aad Mac via cable USB ah, abuurtaan Ciidamada Image.
Ka dibna waxaad arki kartaa in sawirrada ah oo dhan ee aad iPhone Camera Roll halkan ku sugan yihiin. Riix Import All ama ay doortaan qaar ka mid ah oo guji Import iyaga badbaadiya aad Mac.
Fiiro gaar ah: Ka sokow Ciidamada Image, iPhoto iyo xiisaha leh ayaa sidoo kale kaa caawin karaan gurmad sawiro ka iPhone Camera Roll in aad Mac. Tallaabooyinka ku dhowaad isku mid yihiin.
Qaybta 2. Sida loo Pictures ee kaabta ka iPhone Photo Library iyo Photo Stream
Apple oo kaliya in ay gurmad la iPhone, ma users kuwaas oo synced si iPhone via Library Lugood ah oo la wadaago ee Photo Stream sawirada bixisaa dadka isticmaala. Si sawirrada gurmad kaydiyaa iPhone Photo Library iyo Photos Stream, users waa inay raacaan talaabooyinkan hoos ku qoran:
Tallaabada 1. Download Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac)
Wondershare TunesGo iyo Wondershare TunesGo (Mac) waa Lugood si ay hagaajin meesha Lugood dhaco gaaban - taageerto kor u sawirada iyo faylasha kale ka iPhone in computer si ay Lugood ah. Waa in aad kala soo bixi version maxkamad xaq sida uu nidaamka qalliinka computer aad.
Tallaabada 2. sawirro kaabta ka iPhone Photo Library iyo Photos Stream
Burcad software TunesGo ku on your computer. Connect aad iPhone la your computer oo ha TunesGo ah waxaa lagu ogaan. Marka ururinta si guul ah, oo dhan sawiro aad iPhone waxaa lagu soo bandhigaa uu furmo suuqa ugu weyn. Laga soo bilaabo halkan, waa in aad guji Photos, markaas Photo Library ama Photo Stream u muujiyo sawiradan. Dooro iyaga oo guji "Dhoofinta" in ay gurmad kuwaas sawirada iPhone si aad u computer.